Météo Malagasy : fifaninanana maro hanamarika ny faha-115 taona | NewsMada
Météo Malagasy : fifaninanana maro hanamarika ny faha-115 taona
Mamarana ny fankalazana ny faha-115 taonany ny Météo Malagasy. Maro ireo fifaninanana hanamarihana izany izay misokatra ho an’ny rehetra.
Manomboka anio ary tsy hifarana raha tsy ny zoma izao ny varavarana misokatra ho an’ny rehetra karakarain’ny Météo Malagasy etsy Ampandrianomby hampahafantarany ny tantaran’ny Météo tao anatin’ny 115 taona nisiany.
Eo koa ny fampahafantarana ny asan’izany Météo izany ho an’ny mpianatra sy ireo mpanao fikarohana. Hisy ny famelabelaran-kevitra arahina adihevitra ary ny karazan-kilalao sy fanentanana samihafa.
Hisy fandraisan’anjaran’ireo mpitsidika ihany koa amin’ny fanamboarana sary rahona izay alefa amin’ny pejin’ny Météo Malagasy ao amin’ny facebook ka hifaninanana izay mahafantatra ny karazana endriky ny rahona eny an-habakabaka. Misokatra ho an’ny rehetra hatramin’ny 1 marsa 2018 ity fifaninanana ity ka hahazo loza izay mahamarina.
Afaka aterina eny amin’ny Meteo Ampandrianomby ny sarina rahona izay nalainao, na ny sary izay nataonao, na koa ny hosodokona rahona nataonao. Marihina fa harakitra ao anatin’ny “Atlas des Nuages” ny sary omen’ny mpandray anjara ny Méteo.
Ankoatra izany, hisy ny finaninanana “slam-poezia” manondidina ny fiovan’ny toetr’andro. Hatao hatramin’ny 22 marsa sy 23 marsa ny fisoratana anarana amin’izany. Hotanterahina ny 1 jona kosa ny famaranana sy fizarana ny loka ho an’ireo mpandresy.
Hotanterahina ny asabotsy izao eo amin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro ny Diabe ho an’ny toetr’andro.